Nezvedu - Shanghai Bohua Security Equipment Co, Ltd.
Shanghai Hongqiao zvifambiso hub, kambani inoshanda muR & D, kugadzirwa uye kutengesa kwe eyewash. Kubva 2004 kusvika ikozvino, isu takagadzira uye takaburitsa gumi nematanhatu akateedzana uye anopfuura mazana matatu emhando dzeyewash. Yedu yekutengesa vhoriyamu uye tekinoroji zviri munzvimbo inotungamira muChina. Iyo kambani yakateedzana yakapfuudza iyo ISO 9001: 2008 yemhando system chitupa, ISO 14001: 2004 yezvakatipoteredza manejimendi system chitupa, OHSAS 18001: 2007 yebasa hutano uye chengetedzo manejimendi system chitupa, yakawana chitupa cheChina chemhando yepamusoro zvigadzirwa, ndokuhwina iyo Shanghai kiredhiti chinodiwa giredhi "AAA" bhizinesi.
Zvigadzirwa zvekambani zvakapfuura zvichiteedzana: American ANSI z358.1 chitupa, European CE en15154-1: 2006 chitupa, CCS chitupa cheChina Classification Society, yakawana zvitupa zve patent uye huwandu hwechitarisiko dhizaini pateni; vanoomerera kune "hunyanzvi uye kusimudzira" seye simba rekufambisa reBohua kukura, teerera kukwidziridzwa uye kutsvagisa nekusimudzira zvigadzirwa zvemesoji, kuitira kuti tekinoroji yeziso igare iri chinzvimbo chinotungamira
Shanghai Bohua ine timu yakasimba kwazvo yeR & D timu. Iyo ndeimwe yemabhizinesi mashoma muChina anogona kusimudzira uye kugadzira zvigadzirwa zvekushambidza maziso nega. Nenhamba yakakura kwazvo yehunyanzvi hwevashandi uye yakasimba R & D kugona, kambani yakagadzira anopfuura gumi akateedzana uye mazana ezvekuwacha maziso, uye akawana akawanda masitifiketi epatent, zvitupa zvemhando yechigadzirwa, Chinese zvigadzirwa zvine mukurumbira zvigadzirwa, kutendeka mabhizinesi, nezvimwe Kukudzwa kwakawanda.
Iyo kambani inogona kugadzirisa marudzi ese easingaenderane eyewash zvinoenderana nezvinodiwa chaizvo nevatengi. Parizvino, kambani yakagadzira michina mitsva mitsva yekugeza maziso, senge fenzi yekuwacha eyewash, yekumanikidza tangi eyewash chishandiso, chiutsi chinodziya eyewash mudziyo, zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi wega wega.
Hwakanakisa hunyanzvi hwevashandi uye hwakasimba R & D kugona ndiyo yakasimba vimbiso yeBohua yekuchengeta inotungamira tekinoroji mune yeziso washer indasitiri uye yakasimba kutyaira simba kweBohua kuenda kumberi.
GTS American Standard Chitupa
CCS certification yeChechi Sosaiti
Chibvumirano chakakosha chekudzivirira vashandi